राष्ट्रघातीको पहिचान गरी टुडिखेलमा झुण्ड्याउनु पर्छ: राजेन्द्र महतो – Karnalisandesh
राष्ट्रघातीको पहिचान गरी टुडिखेलमा झुण्ड्याउनु पर्छ: राजेन्द्र महतो
प्रकाशित मितिः ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार १४:४५ June 13, 2020
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी सांसद राजेन्द्र महतोले राष्ट्रघातीको पहिचान गरेर टुडिखेलमा झुण्ड्याउनु पर्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने र नयाँ नक्साका बारेमा सर्वदलिय वैठकले पारित गरेको हो। दोस्रो संशोधनका क्रममा मधेशी, जनजाती, पिछडिएको क्षेत्रका केही फरक मतहरु छन्। त्यसैले हामीले भनेको थियौं, संविधान गीता, बाइबल नबनाउनुहोस्, जनताको भावनालाई पनि सम्झिनुहोस्। पार्टी मात्रै होइन दिलपनि ठूलो बनाउनुहोस् भनेको थिए। तर, जे सुकै भएपनि राष्ट्रियताको पक्षमा हाम्रो पुरै सहमति छ। हाम्रो भूमि र राष्ट्रियताका सबैभन्दा माथि छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको सर्वसम्वत सहमती छ।’
सांसद महतोले महाकालि सन्धिको जस्तै फेरी पनि राष्ट्रघात हुने होकि भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्। उनले भने, ‘फेरी राष्ट्रघात हुने हो कि? देशबासी जान्न चाहन्छन्। देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्यो। त्यो कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो। ५८ वर्ष पहिलेसम्म हाम्रै नामको जमिन बेच्ने को हो ?’
उनले अगाडि भने, ‘त्यसको बारेमा लेखाजोखा हुनुपर्दैन? २५ वर्ष पहिले गरिएको महाकालि सन्धिमा काली नदीको स्रोत किटान नगर्ने को हो ? किन त्यस्तो राष्ट्रघात गरियो ? कसले पारित गरायो ? पार्टी फुटाएर पनि राष्ट्रघात गर्ने ? त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान गरेर टुडिखेलमा झुण्ड्याउनु पर्छ ? ढाकछोप गर्ने ? हामी मधेशी नेता र जनतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर कति पटक अग्नि परिक्षा लिने ?’
नेपाल-भारतबीचको सम्बन्भ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नजोडेको स्पष्ट पार्दै मनपर्दो तरिकाले नबिगार्न चेतावनी दिएका छन्।
उनले भने, ‘कागजमा नक्सा छापेर हँदैन। जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्यो। भारतसँगै वार्ता गर्नुहोस्। अर्को कुरा ख्याल गर्नुहोस् ओली र मोदीले जोडेको सम्बन्ध होइन। अनादीकालदेखि नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध छ। जनता-जनताबीचको सम्बन्ध हो। बिगार्न नखोज्नुहोस्। उल्टापाल्टा कुरा नगर्नुहोस्। लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउनुहोस्। जनता र भूमिको रक्षा गर्ने काम सरकारको हो।’